D-130 Wadada Wadada Dhiman ayaa Gaaban doonta | RayHaber | raillynews
HomeGUUDGaadiidka Gaadiidka D-130
Gaadiidka Gaadiidka D-130
12 / 07 / 2013 GUUD, WADADA, Headline
Kuxigeenka Duqa Magaalada Kocaeli Magaalo-Weyne Zekeriya Özak, Kartepe, Başiskele iyo Gölcük xuduuda waxaa lagu sameyn doonaa wadada halbowlaha ah ee D-130 ayaa lagu soo waramayaa in culeyska taraafikada ee wadada weyn la dhimayo.
Isaga oo ka hadlayey kulanka lagu qabtay Gölcük Xarumaha Il Summerca Xilliga xagaaga ee Gölc ,k, qorshaha ugu weyn ee gaadiidka Kocaeli oo leh xog saynis, ayaa sheegay inay sameeyeen, si loo go'aamiyo caadooyinka gaadiidka 10 kun oo sahamin qoys ah, ayay yiraahdeen.
Özak wuxuu sheegay inay wareysi fool ka fool ah la yeesheen guud ahaan xNUMX kun oo qof.
Özak wuxuu cadeeyay inay qorsheynayaan wadooyin cusub iyo isbaarooyin ku yaal Wadada D-130 iyadoo la waafajinayo go’aamada qorshaha iyo iyagoo la kaashanaya Agaasimaha Guud ee Wadooyinka.
Özellikle Waxaan qorsheyneynaa inaan dhisno waddooyinka isku xirka iyo isgoysyada si aan ugu wareejino rarka taraafikada culus ee magaalada wadada weyn ee koonfurta. Wadada weyn ee koonfurta, wadooyinka cusub iyo isgoysyada, Kartepe, Başiskele, Gölcük iyo Karamürsel ayaa yareyn doona rarka gaariga. Waxaa jiri doona gargaar weyn oo ku soo kordha baabuurta xamuulka ah ee soo marta degmooyinka. ”
D-130 Highway iyo TEM Motorway ee ku yaal aagga u dhexeeya aruuriyaha ayaa noqon doona halbowle weyn oo muujinaya Özak, ayaa yiri:
Farshaxan Waxaa mahad leh halbowlaha ka gudbaya xuduudaha Kartepe, Başiskele iyo Gölcük, culeyska taraafikada ee Wadada D-130 waa la yareyn doonaa. Intaa waxaa u dheer, Kartepe, Başiskele, Gölcük iyo Gaadiidka Karamürsel waxay kuxiran doonaan baarkinno cusub, jid-lugey iyo jidadka baaskiilka, saldhigyada wareejinta iyo mashruucyo gaadiid oo badan.
Waddada weyn ee D-130 ayaa isku xirta jidka TEM
D-100 ayaa yarayn doonta cufnaanta taraafikada
University Karabük ee Turkey oo kaliya in ay Rail Systems Engineering leh 130 ardayda ...
size dhaqaale mashaariic ahee Turkey ayaa sii badnayeen dakhliga qaranka ee 130 dalka.
Tirada dadka rakaabka ah maalin walba waxay ku sugan yihiin Kayseri
Hantidhowrka dhismaha gawaarida xayawaanka ee Courthouse iyo horumarinta xariiqa tareenka ee hadda jira
KİK, KMN A. Bursa BB BHRS III. Mashruuca Mashruuca Bariga (East Line) wuxuu diiddan yahay diidmadii lagu soo afjarey hindisada dhismaha hawlaha elektarooniga ah